आपराधिक वकील - अय्यूब विवरण, शिक्षा, तलब, रोजगार
आपराधिक वकील — अय्यूब विवरण, शिक्षा, तलब, रोजगार
आपराधिक व्यवस्था को शरीर छ भन्ने व्यवस्था परिभाषित आपराधिक व्यवहार र लागि दण्ड अपराधीहरूले. यो पनि समावेश छ एक प्रणाली को कानूनी नियम छ कि ठाँउ हो गर्न रोक अनुचित आचरण र रक्षा समाज । यो नियमहरू अधिनियमित छन् द्वारा दुवै राज्य र संघीय कानून बनाउने यो एक जटिल क्षेत्र को व्यवस्था छ । व्यक्तिहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने यी नियमहरू अनुहार गम्भीर परिणामहरू, र अक्सर आवश्यकता, यो सहयोग को एक आपराधिक वकील. आपराधिक वकिल छ । आपराधिक कानून बनाउँछ निश्चित व्यवहार गैरकानुनी र प्रत्येक राज्य रूपरेखा को आचरण छ कि छलफल गर्न एक अपराध हो । प्रत्येक राज्य पनि सेट दण्ड लागि यी अपराधको, जो गर्न सक्छन् मा सीमा खुलारूपमा सानातिना देखि जरिवाना र समुदाय सेवा गर्न जेल वा मृत्यु दण्ड छ । एक अपराध को एक मा पतन दुई विभाग अपराध वा अपराध भएको छ । छन्, सानातिना अपराध मा हुन सक्छन्, जो एक असल वा कम भन्दा एक वर्ष कैद छ । साधारण अपराधको यस श्रेणी मा समावेश: छन् अधिक गम्भीर, र अपराधीहरूले गर्न सक्छन् अनुहार मा एक वर्ष भन्दा बढी जेल वा मृत्यु दण्ड खुलारूपमा निर्भर छ । अपराध मानिन्छ कि समावेश: जुनसुकै अपराध को एक व्यक्ति संग चार्ज छ, तिनीहरूले छन् बस्दा गर्न सही सल्लाह गरेर छैटौं संशोधन. संविधान । यदि एक व्यक्ति आपराधिक शुल्क सामना गर्न असमर्थ छ खर्च एक वकील, अदालतमा नियुक्त गर्नेछ एक तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व छ । एक आपराधिक रक्षा वकील धेरै जिम्मेवारीहरू सहित मदत ग्राहकहरु बुझ्न आपराधिक व्यवस्था छ । तिनीहरूले लिन एक गहिरो नजर मा मामला विकास मदत गर्न सबै भन्दा राम्रो रक्षा को लागि आफ्नो. पछि निर्णय मा को रक्षा, तिनीहरूले प्रमाण भेला, फाइल, र धाउन अदालत सुनवाई. आपराधिक वकिल पनि सुनिश्चित आफ्नो ग्राहक गरेको संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन छैन, कुनै पनि समयमा आपराधिक प्रक्रिया हो । आपराधिक वकील रूपमा काम अभियोजन वा जिल्ला वकीलहरु संग छन् प्रस्तुत प्रमाण र पछि अभियोजन तर्फबाट सरकार । कहिलेकाहीं तिनीहरूले संग सहकार्य आपराधिक रक्षा वकीलहरु प्रदान गर्न, यो प्रतिवादी एक दलील सौदा छ, जो बीच एक सम्झौता को मुद्दा चलाउने व्यक्ति र प्रतिवादी, यो प्रतिवादी सहमत दोषी निवेदन गर्न लागि विनिमय मा एक कम वाक्य वा शुल्क गिरा छ । एक आपराधिक वकील एक लाइसेन्स वकील र एक लाइसेन्स प्राप्त गर्न आवश्यक पहिलो प्राप्त एक स्नातक गरेको डिग्री, र त्यसपछि एक डिग्री । कुनै एक क्षेत्र को अध्ययन गर्न भर्ना लागि आवश्यक व्यवस्था स्कूल, तर साधारण लागि विद्यार्थीहरूको समावेश राजनीतिक विज्ञान, अङ्ग्रेजी, र व्यापार ।, पारित व्यवस्था स्कूल प्रवेश परीक्षण रूपमा, आफ्नो स्कोर छ एक कारक व्यवस्था विद्यालय भर जब बनाउने भर्ना निर्णय छ । व्यवस्था स्कूल तीन वर्ष कार्यक्रम एक वर्ष अध्ययन आधारभूत व्यवस्था र निम्न दुई वर्ष मा एक विशिष्ट क्षेत्र वा व्यवस्था छ । स्नातक पछि, व्यवस्था स्कूल, पट्टी मा परीक्षा को राज्य मा जो तपाईं इरादा अभ्यास । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, अभ्यास गर्न मा एक भन्दा बढी, तपाईं गर्न आवश्यक हुनेछ लिन पट्टी परीक्षा मा प्रत्येक को ती राज्य अमेरिका. एक मास्टर कानून को डिग्री लागि उपलब्ध छ, व्यवस्था स्कूल स्नातक. यो अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता कार्यक्रम दिन्छ, तपाईं एक अधिक मा-गहिराई नजर मा आपराधिक व्यवस्था छ । विशिष्ट अतिरिक्त लाइसेन्स आवश्यकताहरु अभ्यास गर्न व्यवस्था द्वारा भिन्न राज्य । यस अनुसार श्रम तथ्याङ्क ब्यूरो, लगभग सबै अमेरिका जनादेश कि वकिल पूरा सतत शिक्षा पाठ्यक्रम एक नियमित आधार मा सामान्यतया सबैलाई, तीन वर्ष छ । यो राख्छ तिनीहरूलाई माथि-देखि-मिति मा नयाँ नियम, वर्तमान मामला मिसाल, र मुद्दाहरू मा आफ्नो अभ्यास को क्षेत्र । अधिकांश आपराधिक वकिल काम मा व्यवस्था कम्पनीहरु वा निजी प्रचलन संग, ती कार्यरत द्वारा ठूलो कम्पनीहरु साधारण कमाई उच्चतम. केही पनि काम को लागि सरकार सार्वजनिक रूपमा रक्षक, र जिल्ला वकीलहरु.
एक गैर-मुनाफा संगठन प्रतिनिधित्व गर्न कम-आय ग्राहकहरु असमर्थ किराया गर्न सल्लाह. जबकि, तिनीहरूले खर्च एक राम्रो राशि को समय मा एक कार्यालय, आपराधिक रक्षा वकीलहरु पनि पूरा ग्राहकहरु संग राजदरवार मा, जेल, र अन्य सेटिङ. किनभने तिनीहरूले अक्सर ह्यान्डल एक पटक भन्दा बढी मामला मा एक पटक, यो असामान्य छैन लागि यी कानूनी पेशेवरों काम गर्न लामो, अव्यवस्थित घण्टा. को भर्ती को लागत एक आपराधिक वकील मा निर्भर भिन्न हुनेछ धेरै कारक सहित, यो वकील गरेको विशेषज्ञता, प्रतिष्ठा, र भौगोलिक स्थान साथै खुलारूपमा को शुल्क. सबै भन्दा वकीलहरु लागि अधिक चार्ज अवस्थामा रूपमा सजाय अधिक गंभीर छन् र सामान्यतया अधिक आवश्यकता अदालत स्वरूप । सामान्यतया, आपराधिक रक्षा वकील चार्ज एक घण्टाको दर देखि, यो भविष्यवाणी कठिन छ कति घन्टा तिनीहरूले मामला मा खर्च. अन्य वकिल गर्न सक्छ चार्ज एक तला दर, लागि एक विशेष आरोप — एक, उदाहरणका लागि, — र यो उदाहरणका मा, शुल्क नै रहेको जुनसुकै कसरी लामो को यो लिन्छ मामला समाधान गर्न छ । मा निर्भर व्यवस्था, केही वकिल अनुमति ग्राहकहरु प्राप्त गर्न एक भुक्तानी योजना मा अरूलाई आवश्यकता गर्दा एक. एक एक शुल्क भुक्तानी रूपमा प्रेरित कि एक जम्मा को प्रकारका, र वकील प्रयोग गर्दछ यो रूपमा उहाँले काम मा मामला छ । यो अत्यावश्यक छ छलफल गर्न शुल्क र व्यवस्था संग वकील एक अनुबंध हस्ताक्षर अघि छ । पनि, वकील के छ र छैन मा समावेश शुल्क । असमर्थ छन् भने तपाईं खर्च गर्न एक वकील, तपाईं को लागि योग्य हुन सक्छ एक सार्वजनिक रक्षक छ । भने तपाईं सक्नुहुन्न किराया एक आपराधिक वकील कारण आर्थिक कारण, सम्पर्क एक सार्वजनिक आफ्नो क्षेत्र मा.
औसत वेतन लागि वकीलहरु छ डलर, वर्षेनी (डलर
मानवअधिकार.) को रूपमा अनुसार, श्रम तथ्याङ्क को ब्यूरो व्यावसायिक दृष्टिकोण पुस्तिका. तर, छैन छुट्याउन क्षेत्रहरु को अभ्यास छ, त्यसैले यो खाता लागि सबै लाइसेन्स वकिल छ । सामान्य मा, अनुभवी आपराधिक वकिल काम मा ठूलो कम्पनीहरु वा धनी, चिरपरिचित ग्राहकहरु गिरावट मा उच्च अन्त को स्पेक्ट्रम । केही वकिल संग वरिष्ठता र विशेषज्ञता बनाउन सक्छ डलर, प्रति वर्ष वा बढी. रोजगार दर लागि वकिल बढ्न आशा छ मा एक दर को बीच र छ । यो दर छ औसत लागि सबै. पेसा हो । प्रतियोगिता जब लागि कानूनी क्षेत्र बलियो भइरहन आशा छ रूपमा बढी विद्यार्थी स्नातक व्यवस्था स्कूल भन्दा जब उपलब्ध भएको छ । संग एक अपराध, कुनै कुरा कसरी सानो, तपाईं गम्भीर दण्ड सामना र नतिजा सहित जेल समय, समुदाय सेवा, परिवीक्षाधीन, र उकालो जरिवाना । जबकि केही मानिसहरू छनौट प्रतिनिधित्व गर्न आफूलाई भर कानुनी प्रक्रिया, सही आपराधिक वकील एक विशाल फरक बनाउन सक्छ मा आफ्नो मामला को नतिजा छ । किनभने तिनीहरूले थाहा इन्स र को व्यवस्था, तिनीहरूले गर्न सक्छन् मूल्याङकन गर्नु आफ्नो मामला र मूल्यांकन को आफ्नो अवसरहरुमा पिटाई शुल्क. तिनीहरूले पनि मदत गर्न सक्छ तपाईं बुझ्न आपराधिक न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित र आफ्नो अधिकार सुरक्षित छन् । छु भने तपाईं निर्णय गर्न एक वकील किराया, यो आवश्यक छ कि एक पाउन छ लागि सबै भन्दा राम्रो आफ्नो व्यक्तिगत मामला हो । किनकि अपराधको दायरा गर्न, सही आपराधिक वकील हुनेछ आवश्यक कौशल स्तर आवश्यक रक्षा गर्न आफ्नो मामला । उदाहरणका लागि, वकील हुनुपर्छ अनुभव संग अपराध दृश्य अनुसन्धान, प्रमाण, र प्रहरी साक्षी साक्षात्कार. आफ्नो वकील पनि हुनुपर्छ परिचित राज्य र स्थानीय. जब तपाईं पाउन संभावित आपराधिक वकील, तपाईं एक परामर्श सेट गर्नुपर्छ, जो अक्सर. यस परिचयात्मक बैठक मौका दिन्छ बारे सोध्छन् गर्न वकील गरेको अनुभव, विशेषज्ञता, र कानूनी शुल्क । आपराधिक वकील भारी हुन सक्छ, तर यो हुन छैन.
तपाईं आफैलाई केही समयको बचत र चिन्ता
सबैभन्दा भरपर्दो तरिका पाउन एक वकील सोधेर परिवार र मित्र भने, तिनीहरूले थाह को वा प्रयोग गरेका छन् एक आपराधिक रक्षा वकील तिनीहरूले भनेर सिफारिश छ । तपाईंलाई थाहा छ भने, एक वकील भन्ने प्रचलन मा अर्को विषय क्षेत्र, तपाईं पनि तिनीहरूलाई सोध्न को लागि सिफारिश । अर्को विकल्प खोजी एक वकील. धेरै छन् डेटाबेस उपलब्ध गरौं भनेर तपाईं खोज द्वारा अभ्यास क्षेत्र वा स्थान. केही पनि बारेमा जानकारी प्रदान वकिल, अनुभव सहित, मामला उदाहरण, र शास्त्रीय रेकर्ड. पनि, अमेरिकन बार एसोसिएसनले वेबसाइट तपाईं सीधा हुनेछ लाइसेन्स वकीलहरु आफ्नो राज्य मा. तपाईं पर्याप्त आराम महसुस संग आफ्नो आपराधिक वकील तपाईं गर्न सक्छन् भन्ने कुरा खुल्लमखुल्ला बारेमा आफ्नो शुल्क र आफ्नो चिन्ता आफ्नो मामला सन्दर्भमा. यो लिन सक्छ बैठक भन्दा बढी संग एक वकील तपाईं पहिले एक पाउन छ कि सबै भन्दा राम्रो फिट छ ।
परिसमापन को कानूनी वस्तुहरूको